Meltblown Cloth Mask Vagadziri uye Vanotengesa - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Musha > Zvigadzirwa > Masks > Meltblown Cloth Mask
Izvi zvinotevera ndezveMeltblown Cloth Mask zvine hukama, ndinovimba kukubatsira kuti unzwisise zviri nani Meltblown Cloth Mask.
Utachiona hahuvepo hwoga, asi mumadonhwe uye eriosol droplet cores. Masks, masks egesi, uye zvipfeko zvekudzivirira zvine maitiro ekusefa, iyo iri yepakati fafita dhiraundi-meltblown isina-yakarukwa machira.
Meltblown Cloth Mask inonyanya kushandiswa kuchenesa micron-sized particles senge guruva, maorganices, uye haze. Iko kugoverwa kwakasununguka kwe polypropylene ultrafine fibers inonamira pamwe chete, uye kutaridzika kuchena, kwakapfava, uye kwakapfava. Iyo yekugadzirwa fiber fibereness ndeye 0.5-1.0 microns. Iko kugoverwa kwakasarudzika kwemafirita kunopa mimwe mikana yekupanana mafuta pakati pehombodo, nekudaro vachiita meltblown. Iyo gesi giraidhi zvinhu ine yakakura yakatarwa nzvimbo nzvimbo uye yakakwirira porosity (â ‰ ¥ 75%). Mushure mekunyanyisa voltage electret electrostatic kurapwa, iyo ine maitiro ekudzikisira yakaderera, yakanyanya kushanda uye yakakwirira guruva inobata kukwanisa.
Meltblown Cloth Mask rudzi rwemhando isina-yakarukwa ine magetsi akadzika. Meltblown inzira yakajairika yekugadzira micron uye nanofibers. Iyo polypropylene polymer solution inodhonzwa ne Ultra-yakanaka polypropylene pfupi mafetita ane dhayamita ye 0.5-1.0 microns neakakwira-akamhanya madiki maNzzles.
Meltblown Cloth Mask ine yakasarudzika dense faidhi inoramba fiber fiber, iyo inowedzera huwandu uye nzvimbo yenzvimbo yefiber pane imwe nzvimbo nzvimbo, uye voids yakanyatsonaka. Kuburikidza neyepamusoro-voltage electret electrostatic kurapwa, iyo fiber ine iyo yemagetsi electrostatic adsorption, ine mweya wakanaka wekushomeka.
Iko kusefa kwemhedzisiro yemelblown isina-yakarukwa machira ndeye "kunyemwerera curve". Zvese zvidiki zvidimbu uye makuru masumbu zvinogadzirwa nyore. Nano-saizi isiri-oiri masendimita ine dhayamita isingasviki 0,1 micron inogona electrostatically adsorbed, uye iyo tsvina mhedzisiro inosvika 99%. Particles yakakura kupfuura gumi maikironi muhupamhi inogona kudhonzwa nemhando yemuviri weiyo inopindirana yarns, uye kunyange yakaipisisa gauze masks inogona kuwana dziviriro padanho kusvika ku80%.
Iyo yakanyanya kuomesesa mafirita iri muhupamhi hwe3,3 micron di ububanzi. Nekudaro, chiyero chekuonekwa chemasks muChina chinoshandisa 0,3 micron sodium chloride particles seyo index index. Meltblown micheka isiri-yakarukwa ine hukobvu isingasviki 0,1 mm inogona kusefa sodium chloride masisitimu e3,3 maikononi kupfuura 70%.
Hutachiona huripo mumadonhwe uye aerosol droplet nuclei, makumi masere neshanu muzana mahupamhi hwemakiromita 0,74 kusvika 2.12. Naizvozvo, Meltblown Cloth Mask inova midziyo yakakosha senge masks uye HEPA mafirita, ayo anogona kunyatso kudzivirira hutachiona uye kutora chinzvimbo chisingarapike muminda yekurapa nehutano.
Hot Tags: Meltblown Cloth Mask, Vagadziri, Vagadziri, Wholesale